'Ninkii weeraray Manchester in uusan kaligii ahayn bay u badan tahay' - BBC Somali
'Ninkii weeraray Manchester in uusan kaligii ahayn bay u badan tahay'
Image caption Booliiska ayaa sheegay in Salman Abedi uu ahaa ninka qarxiyay Manchester
Ninka gaystay weerarkii Manchester waxay u "badan tahay" in uusan kaligii soo maleegin weerarka, sida ay sheegtay wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Amber Rudd.
Salman Abedi ayaa dilay 22 ruux dhaawacayna 64 kale ka dib markii uu isku qarxiyay goob wayn oo ku taala Manchester oo lagu hayay bandhig faneed habeenkii Isniinta - labaatan ruux oo ka mid ah dadka ku dhaawacmay qaraxa ayay xaaladdooda caafimaad aad u liidataa lana dabiibayaa.
Heerka feejignaanta ee Britain ayaa la gaarsiiyay meeshii u saraysay, taas oo ka dhigan in ay macquultahay in weerarro kale qarka soo saaran yihiin
Dowlada Britain ayaa sheegtay in ciidamada milateriga ay ka qeyb qaadan doonaan ilaalinta goobaha muhiimka ah ee dalkaasi kaddib weerarkii Manchester.
Arrintani oo ah mid dhif iyo naadir ayaa waxaa ku dhawaaqday ra'iisul wasaarah dalka ingiriiska Theresa May oo sidoo kale sheegtay in sare loo qaaday heerka feejignaanta ee Britain kaddib markii qiimeyn rasmi ah lagu sameeyay khatarta dalka ka soo wajaheyso argagixisada, taasi oo ka dhigan in weeraro horleh ay dalka ka dhici karaan.
Image caption Ciidamada ammaanka ee Britain
Dareewal Soomaali ah oo u dhowaa Goobta qaraxu ka dhacay
May waxay intaa ku dartay suurta galnimada ah in ninka weerarka geystay ay ku wehliyaan shaqsiyaad kale.
Weerarkan oo ka dhacay magaalada Manchester ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya 22 qof, waxaana sidookale ku dhaawacmay dad ka badan 50 qof.
Sida ay shegeen booliska, weerarkani ayaa waxaa geystay Salmaan Abedi oo 22 sano jir ahaa.
BBC-du waxay fahansan tahay inuu ku dhashay Manchester asal ahaana uu ka soo jeeda Liibiya.
Abedi, iyo seddax carruur oo la dhalatay ayaa waxay marar kala duwan degeen xaafado ku yaalla Manchester oo mid ka mid ah boolisku ay baareen.
Qaar ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkaasi ayaa la shaaciyay magacyadooda. 16 ka mid ah waxaa la sheegay inay ahaayeen carruur.
Image caption Saffie Roussos iyo Georgina Callande oo kamid ah caruurtii halka ku dhimatay
Image caption John Atkinson, 28 jir kamid ahaa dadkii weerarka ku dhintay
Booliska ayaa wali hawlgal ka wada magaalada Manchester.